Kukiyadaha Sonkorta fudud (Laga soo bilaabo xoqida) FOOL-PROOF - Kukiyada
Cunto fudud oo Kukli ah oo Sonkor ah oo dhadhaminaysa wax cajiib ah oo haysa qaabkeeda markay dubayso
Cuntadan fudud ee buskudka sonkorta leh ee cajiibka ah Susan Trianos waxaa ka buuxa macaan, waa mid jilicsan oo xajinaya qaabkiisa ka dib dubista! Waxaa lagu hagaajin karaa dhadhanka aad dooran karto inaad ku darto. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn!
Susan waxay na tuseysaa sida loogu sameeyo qaabkeeda cajiibka fudud ee cookie-ka Kate Spade ayaa u waxyooday casharka cookie on Sugar Geek Show! Casharradan waxaa ku duugan macluumaad buuxa oo waxtar leh oo ka gudbaya cajiinka sida loo sameeyo miraha boqortooyada, sida loo khafiifiyo si habboon, tuubbo iyo xitaa sameynta khiyaano dhuumasho ah. Waxaan si dhab ah u bartay daawashada casharkaan!
Sameynta karinta fudud ee cookie-ka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee rootiga uu sameyn karo. Waad habeyn kartaa dhir udgoon iyo cabitaanno lagu daray si aad u abuurto cookie isku-dhafan ama aad uga dhigto mid aad u fudud. Ikhtiyaarrada ayaa adiga iska leh iyo nooca dhadhanka aad u socoto. Qaybta ugu fiican, mar kasta oo aad sameysid karinta fudud ee cookie-ka, way ka duwanaan kartaa tii ugu dambeysay!
Maxaa ka dhiga buskudka cookie-ka?
Qoyaanka badan ee kor ku xusan waxay saameyn weyn ku leeyihiin isku-dheelitirkaaga 'cookies'. Cuntada, waqtiga dubista iyo heerkulka waa in la hagaajiyaa si loo helo qoyaanka aad raadineyso. Marka hore, haddii aad isticmaaleyso sonkorta buniga ah, waxaad u baahan tahay inaad xusuusato in ay ku jirto maadada loo yaqaan “molasses”, taas oo ah boqolkiiba 10 biyo ah. Markaad ku xidho biyo subagga, ukunta iyo sonkorta buniga ah bur, waxay yareysaa uumi-baxa. Cajiinka wuxuu u baahan yahay in yar oo daqiiq ah, tani waxay ka dhigeysaa cajiinka xoogaa adag. Markaad haysatid cajiin adag, way sii faaftaa si ka yar dareeraha uumi baxa iyo buskudku wuxuu ku dhammaadaa mid sii ballaadhan oo u dhigma buskud jilicsan oo jilicsan.
Markaad ku beddelayso cuntadaada cookie-ga ah marwalba waa inaad xusuusataa in dhammaan walxaha aysan ku jirin qaddar isku mid ah. Marka hore waa inaad tixgelisaa haddii waxa aad beddeleyso ay leeyihiin isla guryaha. Sababtoo ah sonkorta buniga ah waxay ku leedahay qoyaan ka badan sonkorta cad, haddii aad soo qaaddo buniga oo aad ku beddesho caddaanka, waxaa laga yaabaa inaad ku dhammaato buskud buskud leh.
Cufnaanta buskudkaagu sidoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa cuncun. Sababtoo ah waxaan jecelahay buskud wanaagsan oo la calaliyo, waxaan u sii jeedaa inaan sii weynaado. Haddii aad karisid buskud ballaaran oo ballaaran oo heerkulkiisu sarreeyo waqti yar waxaad yareyn doontaa faafitaanka waxayna ku adkeysanayaan dibedda laakiin dhexda ku joog.
Ugu dambeyntiina, waxaan hayaa hal talo oo dheeri ah oo ku saabsan buskudka la kariyo. Ha dubin iyaga ilaa0 dheer. Waxaad dooneysaa inaad iyaga ka fogeyso foornada markii cookie-ku waxyar ka bunni yahay bannaanka oo ugu yaraan saddex meelood meel xarunta weli waa mid cirro leh. Natiijada ka saarista buskudka foornada hore, waxaad yeelan doontaa xarun jilicsan oo jilicsan. Aan jeclaa!
Maxaa ka samee buskud adag?
Halkan, waxaad dooneysaa inaad sameyso wax ka soo horjeeda talada kore. Halkii aad ka kordhin lahayd maaddooyinka leh qoyaan badan, waxaad u baahan doontaa inaad iyaga yareyso taasoo keenta cookie qalalan. Maaddooyinka aad yareyn karto qaarkood waa bur, ukun iyo sonkor bunni ah. Yaraynta maaddooyinkaas waxay u sahlaysaa uumi-baxa dareerayaasha inta lagu jiro dubista, sidaas darteed waxay keeneysaa buskud wanaagsan. Ku fiicnaanshaheynta caanaha.
Tilmaamaha soo socda ayaa ah in la dubo iyaga waxoogaa ka dheer intii la soo jeediyey, laakiin hubi in heerkulku hooseeyo, ma doonaysid inay gubtaan, taasi maahan nooca qallalan ee aan u maleynayo inaad u socoto.
Maxaa sababa buskudku inay noqdaan kuwa buuxan?
Haddii aad u socoto nal, buskud buufis leh waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho gaabinta ama xitaa margarine laakiin iska yaree xaddiga dufanka aad isticmaaleyso. Ku dar ukun dheeraad ah oo sonkorta iska jar. Tilmaam kale oo ku saabsan buskud badan oo buskud leh ayaa ah in la isticmaalo burka keegga ama burka la dubo oo la isticmaalo budada dubista halkii laga isticmaali lahaa soodhaha. Sidoo kale qaboojiyahaaga ka hor intaadan dubin buskudkaaga.
sida loo sameeyo rinjiga la cuni karo si loogu qurxiyo keega
Maxay ku dubtaa soodhada buskudka?
Soodhada dubista waxay sii deysaa gaaska kaarboon dioxide, kaas oo ka caawiya khamiirka cajiinkaaga. Tani waxay abuurtaa cookie jilicsan oo qalafsan. Soodhaha dubista waxaa badanaa loo isticmaalaa cuntooyinka leh maaddada aashitada. Sida khalka, labeen dhanaan ama liinta.
Waa maxay shaqada budada dubista ee ku jirta buskudka?
Budada dubista waa khamiir labo-in-hal kiimiko ah oo isku daraya alkali budada leh aashito budo ah. Maaddaama budada dubistu ay isku daraan labadan, waxay baabi'ineysaa baahida loo qabo waxyaabo dheeri ah oo ku jira cajiinkaaga sida buttermilk, labeen dhanaan ama ku dar aashito maaddaama aan wax firfircoon loo baahnayn marka la isticmaalayo budada dubista. Markii lagu daro cajiinka ama baytari, falgal kiimikaad ayaa dhacaya oo soo saara gaaska kaarboon laba ogsaydhka, oo buskudka ka dhigaya.
Haddii aad ilowdo budada dubista waxaad u badan tahay inaad ku dambeyso xoogaa fidsan, buskud adag.
Maxay buskudyadaydu aad ugu faafayaan?
Sababtoo ah foornada qabow waxay ku qasmi kartaa cookies-kaaga sida ugu badan ee foornada kulul ay u awooddo, waxaad xaqiiqdii u baahan doontaa inaad hubiso heerkulkaaga ka hor intaadan waxba qaban. Haddii foornadaadu ay kululeyso subagga cajiinka way dhalaali kartaa si dhakhso leh, taasoo keenta in buskudyadaadu ay aad u faafaan ka hor intaanay burku helin fursad ay ku adkaato. Foornooyinka way kala duwanaan karaan, markaa hubi inaad ku sameysid qaar ka mid ah 'cookies cookies' heerkullo kala duwan si aad u hubiso inaad heshay koox dhan oo sax ah.
Sideed u jilcinaysaa buskudka guriga lagu sameeyo?
Halkan waxaa ku yaal talo-bixin yar oo adiga kugu saabsan oo aan sameeyo. Waxaan qaataa gabal rooti ah (cadaan ayaa ugu fiican maxaa yeelay kuma wareejinayo dhadhanka buskudkaaga) ka dibna ku rid weel. Isticmaal hal xabbo oo rooti ah dersin kasta oo buskud ah. Kukiyada ayaa ka soo nuugi doona qoyaanka rootiga sidaa darteed ka ilaali inay qalalaan. Tani waxay ka dhigi doontaa cookies-kaaga mid jilicsan oo aad u dheer.
Mudo intee le'eg ayaad haysan kartaa buskudka sonkorta leh?
Kukiyada sonkorta ku fiican waa la keydin karaa haddii aad ku keydiso armaajo qabow ama qalalan. Hubso in goobahaasi ay ka fog yihiin saxamada, shooladaha iyo foornooyinka in kastoo. Waxay hayn doonaan ilaa saddex toddobaad. Waad barafayn kartaa ilaa saddex bilood. Kaliya iska hubi inaad haysato shaabad sugan, waxaad xitaa faakiyuum ku darsan kartaa waxoogaa buskud ah boorso kasta. Qofna ma jecla dhadhankaqaboojiyaha ayaa ku gubanaya buskudkiisa ama keega.
Waan ogaa inaad u baahan tahay cudurdaar inaad ku iibsato weel cookie ah
sida loo sameeyo buuxinta miro guduudka ah ee guriga lagu sameeyo
Sidee ku heli kartaa buskudka sonkorta leh si aad u ilaaliso qaabkooda?
Ragga idinkaa leh, kani waa muhiim! Waxaan helay xeelad weyn oo ka caawinaysa buskudkayga sonkorta inay qaabkooda yeeshaan. Marka hore, cajiinkaaga u samee sida ku cad qashinka. Ka dib si tartiib ah u burka dusha sare iyo roodhida wareejinta, soo rog cajiinka ka dibna sii wad jarista qaababkaaga. Ku rid xaashidaada cookie-ka oo ay ku dhegan tahay warqad wax lagu duubo ama silpat (oo ah tan aan isticmaalo) ka dibna GOOBTA KU XIRI ilaa 10 daqiiqo.
Ka soo qaad qaboojiyaha oo si toos ah ugu rid foornadaada kululeysa ee horay loo sii kululeeyay. Waad gebi ahaanba ku samayn kartaa isbeddellada sidoo kale (haddii aad aniga oo kale tahay oo aad haysatid hal xaashi buskud ah oo weynaantiisa ku habboon silloonkeyga) duub, gooyo, barafee, dub. Inta aan dubay, waan rogayaa, gooyaa, barafoobaa, ka dibna dubtaa dufcadda xigta.
Marabtaa inaad waxbadan barato! Ha iloobin inaad iska hubiso barashada cookie-ka wax lagu kariyey ee Kate Spade ee Susan Trianos. Xubin maaha? Ha welwelin! Waxaan helnay tijaabo bilaash ah oo aan kugu xirno
Waxaad ku dambayn doontaa buskud sonkor leh oo qaabeysan markasta! Ugu dambeyntiina, qaab fudud oo buskud cookie ah oo runti aan guul darreysanin!
Cunto kariska sonkorta fudud ayaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah, fasax kasta ama munaasabad gaar ah. Waa la cuni karaa si caadi ah, ama si hufan ayaa loogu qurxiyey macaan guriga , shukulaatada tusaalaha ah iyo dabcan barafka boqortooyada . Waxyaabaha aan ugu jeclahay ee ku saabsan cuntadan fudud ee cookie-ga ah waa xusuusta la socota iyaga. Farxadda ku duugista gabadhayda iyo in iyada ay gacan ka geysato go'aaminta dhadhanka aan dooranno. Ka dib, aniga oo daawanaya iyada qurxinteeda oo ay u siiso kuwa kale qalbigayga ayay diirisaa.
Cuntadani karinta buskudka sonkorta leh ayaa ah mid aad u fudud xitaa gabadha Liz ayaa sameyn karta iyaga! Fiiri fiidiyowgaan xiisaha leh ee iyada iyo Avalon ay ku wada diyaarinayaan karintani buskudka sonkorta leh. Waan jeclahay daawashada caruurta dubo!
Waa kuwan casharrada rasmiga ah ee 'rasmiga ah' ee laga helo Susan Trianos
Susan Trianos caan ku yahay buskudkeeda quruxda badan laakiin ma ogtahay inay iyaguna macaan yihiin? Cuntadani fudud ee cookie-ga ah, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo cajiinka buskudka jilicsan ee xajinaya qaabkiisa markaad dubayso! Waxaad sidoo kale baran doontaa sida loo qaabeeyo dhadhanka wax kasta oo isku dhafan oo aad ka fikiri karto adiga oo aan wax u dhimeyn cajiinka macaan!
Waqtiga Diyaarinta:laba saacado 30 daqiiqado Waqtiga karinta:shan iyo toban daqiiqado Wadarta Waqtiga:laba saacado Afar. Shan daqiiqado Kalori:322kcal
▢8 oz (227 g) Subagga aan cusbada lahayn Heerkulka qolka
▢8 oz (227 g) Sonkorta dahaaran
▢1 weyn (1 weyn) Ukunta
▢1 tsp (1 tsp) Soosaarida Vanilla
▢18 oz (510 g) Burka AP
▢1/2 tsp (1/2 tsp) Nutmeg
▢1 tsp (1 tsp) Caano
▢1/4 tsp (1/4 tsp) Qorfe (ikhtiyaar)
Dhig subagga heerkulka qolka, (milix haddii subagga aan cusbada lahayn) iyo 1 koob oo sonkor ah granulated istaag fiicniha leh lifaaqa daboolka oo isku walaaq hoose illaa uu ka siman yahay. Subagga la kariyey waa inuu noqdaa mid jilicsan oo midab jaalle ah.
Ku dar ukun iskuna qas dhexdhexaad (4 on Kitchenaid mixer) istaagga ku qas ilaa inta si buuxda loogu dhex darayo. Xaaq weelka markii loo baahdo si loo hubiyo in ukunta ay ku jirto.
Kudar soosaarida vanilj. Isku qas ilaa inta laga dhex darayo.
Baaquli gooni ah, ku walaaq maaddooyinka qallalan (AP bur, budada dubista, lowska).
Ku dar walxaha qallalan mashiinka istaagga leh oo qaaddo (qiyaastii 1/3 ee wadarta maaddooyinka qallalan markiiba) iskuna qas illaa inta si buuxda looga dhex jiro. Ku bilow qasniinka si tartiib tartiib ah illaa uu burku uga bilaabmayo isku darka, ka dibna u noqo dhexdhexaad. Xaaq weelka sida loogu baahan yahay si buuxda loogu daro.
Ku dar 1 tsp oo caano ah marka burka si buuxda loogu daro. Sii wad inaad isku darto tartiib tartiib ah illaa cajiinka uu noqonayo tiro adag.
Xaaq weelka wax lagu qaso, ku duub cajiinka buskudka sonkorta leh duub caag ah kuna qabooji qaboojiyaha 2 saacadood.
Caji cajiinka buskudka oo duudduub cajiinka buskudka illaa inta dhuuban si loo jaro qaababka buskudka. Isticmaal buskudka cookie si aad u gooyso qaabab isku mid ah.
Ku rid buskudka xaashida wax lagu dubo ee ku dul xaashida waraaqaha. Xaashida cookie dib ugu celi qaboojiyaha ilaa 15 daqiiqo si aad mar kale u qaboojiso.
Ku kari buskudka la qaboojiyey ee ah 350ºF illaa 10-14 daqiiqo iyadoo ku xiran cabbirka buskudka. Kukiyada waxoogaa yar oo bunni ah oo dahabi ah ayey geeska ka jiri doonaan. Cajiinka la kariyey ee la kariyey wuxuu ku hayn doonaa qaabka foornada mana ballaarin doono ama ma beddeli doono.
Kalori:322kcal(16%)|Kaarboohaydraytyada:40g(13%)|Protein:3g(6%)|Dufan:16g(25%)|Dufan Dufan:9g(Afar. Shan%)|Kalastarol:56mg(19%)|Sodium:142mg(6%)|Kalibaalium:106mg(3%)|Sonkor:16g(18%)|Vitamin A:495IU(10%)|Kaalshiyamka:39mg(4%)|Bir:1.6mg(9%)
Cunto fudud Bagel
sidee u sameysaa dhadhanka keegga sanduuqa dhadhanka sida guriga lagu sameeyo
cuntada fudud ee qoyan kana soo xoq
Gawaarida miraha loo yaqaan 'strawberry shortcake' oo leh keeg cunto malag iyo jeedal qabow
Liinta Raspberry Buttermilk Cake Recipe
Keeggan liin macaan ee cusub waxaa lagu buuxiyay dhadhan liin laakiin qeybta aan ugu jeclahay waa buuxinta cusub ee miiska loo yaqaan 'raspberry fresh' oo lagu dhex wareejiyay keega!
Isfiin jilicsan oo jilicsan qorfe qorfe duubnaan leh jiiska kareemka labeen qaboojiyaha dusheeda dusheeda. Ku darso kuleylka kuleylka!